Mijoro amin'ny fenitra fiarovana vaovao COVID-19 ho an'ny seza ny talen'ny mpamorona | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Ny SubtitleNEXT dia manafaingana haingana ny Subtitling mivantana miaraka amin'ny fampidirana Google ASR
ATV Manitatra sy mampitombo ny fahafaha-manao Playout sy Editing amin'ny alàlan'ny Cinegy Software
Telestream dia mamaly ny dinamika amin'ny tsena miaraka amin'ny fandefasana ny Lightspeed Live C4
FOX dia mandroaka eo alohan'ny lalao miaraka amin'ny fifandraisana Dejero amin'ny Flypacks 'Work From Home'
Home » Featured » Filmcraft Studio Gear Mametraka fenitra fiarovana ho an'ny talen'ny talen'ny COVID-19 vaovao
Filmcraft Studio Gear Mametraka fenitra fiarovana ho an'ny talen'ny talen'ny COVID-19 vaovao
Tao anatin'ny roa volana monja, niova ny maro, ary raha jerena ny valan'aretina COVID-19 ankehitriny, ny seza talen'ny talen'ny asa ho an'ny indostrian'ny famokarana, Filmcraft Studio Gear, namoaka tolo-kevitra momba ny fiarovana seza seza fampiasana sy famaritana famonoana otrikaretina ho an'ny toerana azo antoka. Ny fanoloana ny sezan'ny talen'ny ankehitriny dia misy plastika, ary izany dia satria ny plastika dia voaporofo fa fomba hafa mahomby amin'ny tontolo iainantsika amin'ny resaka biodegradability. Mampitombo ny loza mitatao amin'ny virus fotsiny izany. Ny fandalinana vao haingana dia namaritra amin'ny antsipiriany ny maharitra maharitra amin'ny COVID-19 no lava indrindra raha amin'ny plastika na vy vy. Wood dia iray amin'ireo fitaovana ara-pahasalamana indrindra raha ny amin'ny fanamaivanana ny fahaizan'ny COVID-19, izay hita fa maharitra mandritra ny 7 andro amin'ny sehatry ny plastika ary tsy azo jerena tanteraka ilay virus aorian'ny 2 andro teo ambony kitay. Satria manana fananana antimicrobial voajanahary ny hazo, dia voaporofo fa mahasoa fa tsy mifanohitra amin'ny fandalinana siantifika momba ny fomba ahafahan'ny COVID-19 miaina ny lava indrindra amin'ny plastika, vera ary vy tsy misy vy mandritra ny fito andro.
Ny fepetra fiarovana dia nalaina
Ny dingana voalohany amin'ny hetsika dia ny manana andiany kanvas fanoloana vaovao seza seza. lamba azo hosasana amin'ny savony sy rano ary / na hamafaina ny otrikaretina sy / na manadio ny setroka ary averina ao anaty takelaka seza. Ny hany ilana azy dia ny savoka 5 minitra miaraka amin'ny savony, izay hanimba ny COVID-19 amin'ny lafiny rehetra. Ny kisary seza ny talen'ny hazo no safidy tsara ho an'ny setran'ny sarimihetsika vokatry ny fahaiza-miaina.
Filmcraft Tompon'ny studio Gear, Joe Iacobellis nanoro hevitra ny fomba fanadiovana tsara indrindra ho an'ny seza seza dia:
Tariho miaraka amin'ny antiseptika toy ny Lysol ary avela maina. Ny fanamainana dia matetika latsaky ny 3 minitra
Sasao amin'ny rano mafana sy maina ny rivotra. Most seza seza vita amin'ny landihazo ny canvases ary mora ny manasa. Na izany aza, tsy tokony hamporisika ny hanamaina azy ireo ao anaty fanamainana izahay satria mety handrendrika ireo fonosana plastika amin'ny seza misy ny seza io. Soso-kevitra ny fanamainana ny rivotra
Mampiasà etona handroahana ny etona soa aman-tsara ary tsy mampiasa akora simika mahery. Steamer-etona, matetika hita amin'ny andian-tsarimihetsika sy orinasa mpanofa, dia fomba tsara hamonoana bakteria na virus marobe, ny setroka dia mahatratra 212F ny hafanana izay ampy hamonoana ireo virus rehetra ifandraisany. Io no fomba tsara indrindra sy mora azo averina matetika
Ny kalitao sy ny faharetan'ny sezan'ny talen'ny talen-tsekoly ary ireo toetra ireo dia foto-tsakafom-baravarana voalohany tao amin'ny studio studio nandritra ny 75 taona. Ny zana-kazo amin'ny seza dia azo fafana mora amin'ny Lysol sy / na tasy famonoana otrikaretina hafa. The lamba mety ho voapoizina azo tsapain-tanana tsy misy fahavoazana ny setroka, ary ny antony mahatonga izany dia noho ny halavany amin'ny fitaovana matanjaka izay tsy ampy ho an'ny mpiasan'ny plastika.
Rehefa tonga amin'ny fahasalamana sy fiarovana ny mpanjifany izany, Filmcraft maka ny fahasalamany sy ny fahasalamany ho fiheverana lehibe. Na dia misy finiavana miverina amin'ny zotram-piainana aza Filmcraft mitazona ny laharam-pahamehany ny fanaovana ny kaoniny ho azo antoka sy azo antoka ary madio tahaka ny fanalahidy hiseho amin'ny dingana toy izany.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny Filmcraft sy ny fepetra fiarovana ilaina raisina ho valin'ny COVID-19, tsidiho filmcraftla.com.
TV Production Engineer - Novambra 27, 2020
Technical Media Mpamokatra - Novambra 27, 2020
Casting Assistant - Novambra 27, 2020
biodegradability lamba Covidien-19 seza seza seza seza Filmcraft Sarimihetsika fanaovana sary mihetsika studio Gear Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Joe Iacobellis Litra lysol Matthews areti-mifindra fepetra fepetra fiarovana Telo sy zana-tsipìka Ultra HD Forum 2020-05-11
Previous: Lahateny ara-teknika: fampisehoana NAB mivantana fanontana manokana - LIVE 13-14 Mey 2020
Next: Mamorona workflows mikoriana miaraka amin'i AJA HELO ny Create4MentalHealth